बाध्यात्मक कोर्ट म्यारिज - फ्रन्टपेज - साप्ताहिक
तस्बिरहरु: रवि र निकिताको फेसबुकबाट
सञ्चारकर्मी रवि लामिछानेको २५ वर्ष लामो वैवाहिक सम्बन्ध टुंगिएको खबर सार्वजनिक भएलगतै उनकी पूर्वपत्नी इशा श्रेष्ठले चौथो सम्बन्धका लागि शुभकामना दिएकी थिइन् । पारपाचुके लगत्तै इशाले दिएको शुभकामनाले रवि नयाँ वैवाहिक सम्बन्धमा बाँधिन लागेको अनुमान लगाउन त्यति गार्‍हो थिएन । उनको विवाह चलचित्र विकास बोर्डकी अध्यक्ष निकिता पौडेलसँग हुन लागेको खबर भूसको आगोझैं फैलिइसकेको थियो ।
यद्यपि रवि र निकिता दुवैले आफूहरू साथी मात्र भएको भन्दै सम्भावित विवाहको खबरलाई पूरै नकारे, तर उनीहरूले ‘साथी’ मात्र भएको प्रस्टीकरण दिएको तीन साता नबित्दै गएको सोमबार फेसबुकमार्फत रविले आफूले निकितासँग ‘कोर्ट म्यारिज’ गरेको खुलासा गरे । त्यसपछि रवि निकितासँग वैवाहिक जीवनमा बाँधिएको औपचारिक पुष्टि भएको छ । किन त यति हतारमा कोर्ट म्यारिज भयो ? ‘रविजी र मेरा बारेमा बजारमा विभिन्न खालका नराकारात्मक टिप्पणीहरू बढी हुन थालेपछि बाध्यात्मक भएर हतारमा कोर्ट म्यारिज गर्नुपर्‍यो ।’ निकिता भन्छिन्,‘हामी र हाम्रो परिवारबीच वैशाखमा विवाह गर्ने सहमति भएको थियो ।’
इशासँगको पारपाचुकेपछि निकितासँग रविको प्रेमसम्बन्धले बजार गर्माएको थियो, तर उनीहरूले आफ्नो प्रेम सम्बन्ध सार्वजनिक रूपमा स्वीकार गरेका थिएनन् । कोर्ट म्यारिजपछि रविले साप्ताहिकसँग आफूहरूको विगत ९ महिनायता चिनजान रहेको बताए । ‘हाम्रो ९ महिनायता चिनजान भएतापनि हामी विगत तीन महिनायता प्रेम सम्बन्धमा थियौं । हामीले आगामी वैशाखमा विवाह गर्ने सोच बनाएका थियौं । मसँग नाम जोडिएर निकिताजीको चर्चा हुन थालेपछि उहाँलाई अप्ठ्यारो पर्न थाल्यो,’ उनले भने, ‘त्यसपछि हामी तत्कालका लागि कानुनी रूपमा विवाह गर्ने निर्णयमा पुगेका हौं ।’
निकिताको शालिनता, व्यक्तित्व, व्यवहारिकता, बौद्धिकताजस्ता कुराले आफू उनीप्रति आकर्षित भएको रवि बताउँछन् । ‘उहाँका यिनै बानीले म प्रेममा परेको हुँ,’ रवि आफ्नो प्रेम सम्बन्ध विकसित हुनुको पृष्ठभूमि खोतल्छन्, ‘हामी एउटै अपार्टमेन्टको फरक–फरक फ्लोरमा बस्दै आएका थियौं ।’ निकितासँग सोही अपार्टमेन्टमा चिनजान भएको रवि बताउँछन् ।
निकितासँग नयाँ वैवाहिक सम्बन्धपछि रविको यो तेस्रो वैवाहिक सम्बन्ध हो । यसअघि उनका दुईवटा वैवाहिक सम्बन्ध असफल भैसकेका छन् । रवि अब निकितासँग नयाँ शिराबाट जीवन अघि बढाउन चाहेको बताउँछन् । ‘हामी दुवै जना आजभन्दा अघि घटेका घटनालाई यहीँ पूर्णविराम लगाएर दुवै जना खुसी हुने बाटो पहिल्याउँदै जीवन अघि बढाउँछौं, रवि भन्छन्, ‘अब हाम्रो सम्बन्ध जुगौं टिक्नेछ, अघिका गल्तीहरूलाई सुधार्दै र राम्रा पक्षलाई अनुसरण गर्दै नयाँ शिराबाट जीवनको गोरेटो खन्नेछौं, अब हाम्रो सम्बन्ध जुनी–जुनीलाई ।’ निकिताको पनि यो दोस्रो विवाह हो । उनले यसभन्दा अघि अभय शाहसँग विवाह गरेकी थिइन् । अभयसँग उनले ९ महिनाअघि पारपाचुके गरेकी थिइन् । पहिलो विवाहबाट उनको एक छोरी पनि छिन् ।
रवि र निकिताले आगामी वैशाख महिनामा औपचारिक रूपमा विवाह गर्दैछन् । विवाह कसरी गर्ने योजनामा हुनुहुन्छ ? भन्ने प्रश्नमा रवि भन्छन्, ‘अहिले नै विवाह कसरी गर्ने भन्ने योजना बनाएको छैन । जे होस्, सामान्य तरिकाबाट परम्परागत मूल्य–मान्यताको अधीनमा रहेर निकिताजीको सिउँदो भर्नेछु ।’ रविले इशासँगको पारपाचुके गरेपनि इशातर्फका दुई छोरीको सम्पूर्ण जिम्मेवारी आफैंले लिएको बताएका थिए । यद्यपि रविले अमेरिकामा रहेका छोरीहरूलाई आफ्नो विवाहमा बोलाउँछन् कि बोलाउँदैनन्, कौतूहलता छ । यही विषयमा साप्ताहिकको प्रश्नमा रवि भन्छन्, ‘मैले यो विषयमा सोचेको पनि छैन, मेरै छोरी हुन्, उनीहरूले चाहे भने आफ्नो बाबुको विवाहमा सरिक हुन सक्छन् ।’
रवि सन् २००२ मा अमेरिका गएका थिएँ । अमेरिका गएपछि उनले छोटो समयमै राम्रो प्रगति गरे । आफू अमेरिका पुगेपछि सुरुवाती दिनमा निकै कष्टकर जीवन गुजारेको रवि बताउँछन् । त्यहीं दु:ख गरेर उनले तीन वर्षको अवधिमा बाल्टिमोरमा घर किनें । घर किनेको केही समयपछि उनले (सन् २००८ मा) नेपालमा भएकी श्रीमती इशा र दुई छोरीलाई अमेरिका लिएर गए । रवि अमेरिका र इशा नेपालमै हुँदा उनीहरूबीच शंकाको बिजारोपण भएको निकटस्थहरूको दाबी छ । इशालाई अमेरिका लगेपछि पनि उनीहरूबीचको सम्बन्ध राम्रो हुन सकेन् । रविमाथि एक विदेशी महिलासँग प्रेमसम्बन्ध भएको आरोप लाग्यो । रविसँग लिभिङ टुगेदरमा बसेकी ती महिलाबाट एउटा छोरासमेत जन्मिएको बताइन्छ ।
नेपाल फर्किएपश्चात् संसारकै सबैभन्दा लामो ६२ घण्टा अन्तर्वार्ता लिएर गिनिज बुक अफ वल्र्ड रेकर्ड्समा नाम लेखाएपछि रविको चर्चा चुलियो । त्यसपछि उनले ‘जनतासँग प्रधानमन्त्री’ कार्यक्रम चलाए । सरकार फेरबदलसँगै उक्त कार्यक्रम आफ्नो हातबाट खोसिएपछि रवि न्युज–२४ टेलिभिजनमा ‘सिधा कुरा जनतासँग’ कार्यक्रम चलाउन थाले । उनको यो कार्यक्रम निकै लोकप्रिय भयो । त्यसपछि रविको छवि सेलिब्रेटी पत्रकारको बन्न पुग्यो भने सामाजिक सन्जालमा उनको प्रयासले प्रशंसा पाउन थाल्यो । उनी नेपालमा वर्क परमिट नलिएको जस्ता विवादमा पनि तानिए भने कतिपयले रविको कार्यक्रमको चर्को आलोचनासमेत गरे । यद्यपि उनका डाइहार्ट फ्यान भने लगातार बढिरहे ।
हामी दुवै जनालाई राम्रोसँग चिन्ने एक जना दाइ हुनुहुन्थ्यो । उहाँलाई हाम्रो व्यक्तिगत जीवनका बारेमा राम्रो जानकारी थियो । त्यसपछि उहाँले हामी दुई जनाले विवाह गर्दा राम्रो हुन्छ भन्नुभयो । दुवै जना एक्लै भएको र प्रोफाइल पनि मिल्ने भएकाले विवाह गर भन्नुभयो । त्यसपछि हामीले एक–अर्काको परिवारसँग सल्लाह गर्‍यौं अनि परिवारको सहमतिमै अहिलेका लागि कोर्ट म्यारिज गर्‍यौं ।
मलाई रविजीको केयरिङ एकदमै मन पर्छ भने सरल स्वभाव अनि अन्डरस्ट्यान्डिङजस्ता कुराले मेरो मन जित्यो ।
म श्रीमान्सँग छुट्टिएर बसेको त करिब ७–८ वर्ष भैसकेको थियो, तर मैले २ वर्षअघि मात्र डिभोर्स फाइल गरेको थिएँ । त्यसको प्रोसेसिङ एकदमै लामो हुँदो रहेछ । हामीले ९ महिनाअघि मात्र सहमतिमै डिभोर्स गरेका हौं ।
हामीले माघ ९ गते कोर्ट म्यारिज गरेका हौं । त्यसपछि हामी वैधानिक रूपमा श्रीमान्–श्रीमती भैसक्यौं । अहिले रविजी तेस्रो तलामा र म छैटौं तलामा छु । उहाँले माघ १५ गतेदेखि फ्ल्याट छाड्ने भन्नुभएको छ ।